दाङले मागेको होइन राजधानी, राजधानीले खोजेको हो दाङ : उदय जीएम - Himali Patrika
दाङले मागेको होइन राजधानी, राजधानीले खोजेको हो दाङ : उदय जीएम
हिमाली पत्रिका २० असोज २०७७, 1:28 pm
होटल, यातायात, चौराहा, टोल, गल्ली जताततै प्रदेश राजधानीको चर्चा चुलिएको छ आजभोलि । सर्वाधिक चासो र तातो विषय–बहस बनेको छ, प्रदेश राजधानीको कुरा । संविधान सभाबाट जारी ने पालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसके को अवस् थामा यसले आत्मसात गरे को संघीयता, प्रदे शको सीमा र त्यसको राजधानीको विषय सर्वाधिक चासो बन्नु स् वाभाविक छ । भावी प्रधानमन्त्री को
हो ला ? कुन ने ताले कुन मन्त्रालयको जिम्मे वारी पाउलान् ? यस् ता राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा भन्दा आम मानिसहरुको ध्यान प्रदे शको राजधानी र यहा“को ने तृत्वले तानिरहे को छ । किनकि के न्द्रका कुराले भन्दा मानिसको दै निक जीवनमा आफ्ना वरिपरिका कुराले प्रभाव पानेर् भएकाले त्यसो हुनु पनि पर्छ ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन समे त सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजधानीको कुरा सर्वत्र चासो को रुपमा हे रिनुपर्छ र यो महत्वपूर्ण पनि छ । प्रदेशको राजधानी निश्चित नहुँदा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले शपथग्रहण नै कहा गनेर् ? पहिलो बैठक नै कहा बस्ने जस्ता प्रारम्भिक कुराहरु पनि अनिश्चित र अन्यौ लमै छन् । यतिबे लाको ससानो निर्णयले दूरगामी असर र प्रभाव पानेर् निश्चित छ । यतिबे ला चुके पछि भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अकोर् विकल्प हामीमाझ रहने छैन । त्यसकारण प्रदेशहरुको नामकरण र राजधानी बनाउने कुरालाई हल्कारुपमा बुझ्नुहुदैन ।
मिडियाहरुमा आएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने चार नं. प्रदेशबाहेक अन्य छ वटा प्रदेशहरुमा राजधानीको विवाद चुलिएको छ । हाम्रो सरोकार रहेको ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीको कुरालाई पनि अनाहकमा विवादित बनाइएको छ । यो प्रदे शमा दाङ र रुपन्दे ही बलिया दावे दारका रुपमा अगाडि दे खिएका छन् भने बा“के र कपिलवस् तुले पनि राजधानीको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसबाहेक प्युठानको दक्षिणी भेगलाई पनि प्रदे शको राजधानी बनाउन सकिने तर्क सतहमा नदे खिएका हो इनन् । यहा“ने र प्रश्न उठ्छ– के राजधानी भन्ने कुरा माग्दै मा दिने र माग्दैमा हुने कुरा हो ? प्रमुख र केन्द्रीय विषय हो , हाम्रो ५ नम्बर प्रदेशको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकास । यही केन्द्रीय विषयलाई के न्द्र भागमा राखे र विषयको उठान र बहस गनेर् हो भने पक्कै पनि एउटा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । दाङले माग्दै मा दाङलाई राजधानी दिइनु गलत हुन्छ । केही नेता, केही व्यक्ति, केही समूह, केही पार्टी, केही जिल्ला, केही भेगको स्वार्थकेन्द्रित भएर राजधानीजस् तो संवे दनशील विषयमा निर्णय गर्नु उचित हु“दै न । के ही मापदण्ड र के ही आधार नभई राजधानी बनाइनु सर्वथा गलत हुने छ । मेरो विचारमा दाङले राजधानी मागेको होइन, राजधानीले खोजेको छ दाङ ।
प्रसंग नारायणमान विजुक्छे र नेमकिपा
यहा उल्लेखनीय कुरा के छ भने नारायणमान विजुक्छे को नाम नसुन्ने नेपाली विरलै होलान् । विजुक्छेले नेतृत्व गरेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीको दस्तावे जमा औपचारिकरुपमै नेपालको राजधानी दाङ हुनुपनेर् प्रस्ताव गरिएको छ । एशियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका दाङमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी नामको पार्टी नै छैन । यहा ने पाल मजदूर किसान पार्टीको नीति निर्माणमा प्रभाव पानेर् ठूलै नेता पनि छैनन् । तैपनि नेमकिपाको दस्तावे जमा दाङलाई नेपालको राजधानी बनाउनुपनेर् प्रस्ताव छ । नेमकिपाको दस् तावे जमा कुनै स् वार्थके न्द्रित भएर यो विषय परे को हो इन । गहिरो भौ गो लिक अध्ययन र भावी ने पालको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकासको एकमात्र स् वार्थ भे टिन्छ यो प्रस् तावमा । ने पालकै राजधानीको रुपमा प्रस् तावित दाङमा प्रदे शको राजधानी किन सम्भव छैन ह“ ?
अलिकति दूरीका कुरा
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको विकल्पमा नेपाललाई संघीयतामा प्रवेश गराइएको हो  । सिंहदरवारको अधिकारलाई गाउ–गाउसम्म पु¥याउने र आफ्नो प्रदेशको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकास आफै गनेर् गुलियो नारासहित संघीयता ल्याइएको हो  । शक्ति र पहुचका आधारमा आफूलाई राम्रो लागेको ठाउ“मा राजधानी स् थापना गनेर् हो भने राजामहाराजाले समेत सबै कोणबाट उपयुक्त ठानेका पहिले कै प्रशासनिक एकाईहरु ठीक थिएनन् र ? यहा बारम्बार एमाले नेता विष्णु पौडेलको नाम लिने गरिन्छ र उनको एमालेमा रहेको प्रभाव तथा पहुचलाई दृष्टिगत गरी राजधानी उनैले रुपन्देहीलै जान्छन् भन्ने पनि गरिएको छ । के विष्णु पौडेल नवलपरासीको नहुनु त्यहाका जनताका लागि अभिशाप हो ? के विष्णु पौ डे ल बर्दियाको नहुनु बर्दियाको अभिशाप हो ? के विष्णु पौ डे ल रुकुमको नहुनु रुकुमको अभिशाप हो ? के विष्णु पौडेल सिंगो ५ नम्बर प्रदे श र सिङ्गो ने पालका ने ता होइनन् ? के ठूला ने तालाई कुनै तथ्य, तर्क र आधार चाहिन्न ? फित्ता लगाएर नाप्ने कुरा हो इन सामान्यतया दाङ पा“च नम्बर प्रदे शको सिङ्गो भूगो लका जनतालाई तुलनात्मकरुपमा नजिक पर्छ । दाङ पा“च नम्बर प्रदे शको मध्यबिन्दुमा पर्छ र यसलाई सार्न विष्णु पौडेलले पनि सक्दै नन् । उनले पनि भन्नै पर्छ, मध्यबिन्दु दाङ नै हो । किनकि उनले नाप्ने फित्ता अकोर् हुदैन । राजामहाराजा त्यो पनि तानाशाहको शैलीमा सत्ता, शक्ति र पहुचलाई दुरुपयो ग गरे र आफ्नै निर्णय लाद्ने कुचे ष्टा गरिएमात्रै अन्यथा यो वास् तविकतालाई कसै ले नकार्न सक्दै न । भूगो लको मध्यभाग भएकाले पनि राजधानीले दाङलाई नै खोजिरहेको छ ।
सुरक्षात सबैलाई चाहिएला नि
परिस् िथति सधै ं आफू अनुकूल हुदै न र त्यो कहिले काहीं काबु बाहिर जानसक्छ । परिस् िथति सधै ं सहज हुदै न कहिले काहीं त्यो असहज पनि हुनसक्छ । छिमे की प्रदे श र मुलुकबीचको सम्बन्ध सधै ं सुमधुर रहन्छ भन्न सकिन्न । साम्प्रदायिक दंगा, बाढीपहिरो , डुबान, कटानजस् ता कुनै समस् या नरहे को सुरक्षित जिल्ला हो दाङ । राजधानीको निर्णय गर्दा सहजता र अनुकूलतामात्र हो इन भविष्यमा आउनसक्ने जटिल मोड र संकटपूर्ण अवस् थालाई समेत दृष्टिपात गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकसग सीमा जोडिएको भए तापनि सामरिक दृष्टिले पनि प्रदे शको राजधानीले दाङलाई नै खोजि रहेको छ ।
दाङमा गर्मी समयमा मनेर् खालको गर्मी हुदैन । दाङमा जाडो समयमा मनेर् खालको जाडो पनि हुदैन । शितलहर वालु चले र मृत्युको मुखमा पुग्ने डर यहा छैन । त्यस्तै, गर्मीमा उखरमाउलो गर्मी भएर बस् नै नसकिने र गर्मीका कारण उत्पन्न हुने विभिन्नखाले रोगबाट पनि यो जिल्ला मुक्त छ । त्यसकारण राजधानीका कारण यहा आउने अन्य ११ वटै जिल्लाका आम जनताका लागि सहज र आरामदायी बसाइको व्यवस्था यहा हुने छ । बाकी ११ वटै जिल्लाका जनताले सहजरुपमा ग्रहण गर्नसक्ने हावापानीका कारण पनि राजधानीले दाङलाई नै खोजिरहेको छ ।
प्रदेशको राजधानीका लागि चाहिने पूर्वाधार दाङमा पर्याप्त छ । घोषणा भएलगत्तै चाहिने तैयारी अवस् थाका पूर्वाधार चाहिएको हो कि पछि गुरुयो जना बनाएर विकास गरिने जग्गाजमिन ? दुबै विकल्प छ दाङमा । भर्खरै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुखेर् तबाट आएको सरकारी अध्ययन टोलीले प्रदेश राजधानी घो षणा भएलगत्तै आवश्यक पनेर् भौ तिक पूर्वाधारहरु यकिन गरेर गइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास, मन्त्री र मन्त्रालय तथा निवास, प्रदे श सभा भवन, अन्य सरकारी निकायका लागि आवश्यक पनेर् सबै पूर्वाधारहरुको निधो गरे र सरकारी टो ली गइसके को छ । भविष्यमा गुरुयो जनासहित मुलुककै नमूना राजधानीको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रशस् त जग्गाजमिनको सहज उपलव्धता पनि दाङमै छ । त्यसकारण पनि राजधानीले दाङलाईनै खोजिरहे को छ ।
अधिकारसम्पन्न संसदीय समितिको प्रस्ताव– दाङ आफू कहाको बासिन्दा हो भन्ने दृष्टिबाट राजधानी घोषणा गरिनु सर्वथा गलत कुरा हो  । सिङ्गो पाच नम्बर प्रदेशका जनताको सुविधालाई केन्द्रमा राखे र निर्णय गरिनुपर्छ । त्यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना सिफारिस समिति गठन गरे को थियो  । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टे कबहादुर बस् ने तको अध्यक्षतामा रहे को यो संसदीय समितिमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रे खा शर्मा, राजे न्द्र पाण्डे , आरजू देउवा, भुवन पाठक सदस्य थिए । संसदको अधिकारसम्पन्न र सर्वपक्षीय यो समितिले सबै मापदण्ड र आधारहरुको मिहिन अध्ययन गरी सातवटै प्रदे शको राजधानीका लागि स्थान छनोट गरेर सरकारलाई सिफारिससमे त गरिसके को छ । उक्त अधिकारसम्पन्न समितिले पनि पा“च नम्बर प्रदे शको राजधानी सबै दृष्टिले दाङ उपयुक्त हुने निर्णय र सिफारिस गरिसकेको छ । यो आधारले पनि प्रदे शको राजधानीले दाङलाई नै खोजेको छ ।
प्रदेश कार्यालयहरुको उपस् िथति दाङमा
शक्ति र पहुचका कुरा गनेर् हो भने अलग कुरा । यदि १२ वटै जिल्लाका सर्वसाधारण नागरिकलाई ५ नम्बर प्रदेशको नक्सा दे खाएर १२ वटै जिल्लाका जनताका लागि राजधानी पुग्न सहज सुविधा हुने पूर्वाधारयुक्त जिल्ला कुन हो ? भनेर सोध्ने हो भने उत्तर आउने छ– दाङ । कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहबिना आउने नाम नै दाङ भएको र अधिकारसम्पन्न संसदीय समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारका विभिन्न अंग र निकायका प्रदे श कार्यालयहरु पनि यसअघि नै दाङमा स् थापना भइसके का छन् । हालसम्म दाङमा उच्च अदालत, ने पाल प्रहरीको प्रदे श कार्यालय, सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गको प्रदे श कार्यालय स् थापना भइसके का छन् । त्यसबाहे क रे डियो ने पालको प्रदे शस् तरीय प्रसारण के न्द्र पनि दाङमा बनाउने प्रक्रिया चलिरहे को छ । पार्टीगतरुपमा हे र्दा माओ वादी के न्द्रको प्रदे श कार्यालय दाङमै छ भने अन्य विभिन्न गै रसरकारी संघसंस् थाका कार्यालयहरु पनि दाङमा स् थापना भइसकेका छन् ।
प्रदेशको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकास
पाच नम्बर प्रदेशको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकास न्यायको तराजुजस्तै हुनुपर्छ । हामी सबैको मुख्य सरोकार र केन्द्रीय विषय यही हुनुपर्छ । १२ वटै जिल्लाको समानरुपमा विकासका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान के न्द्रित हुनुपर्छ । रुपन्देही आफै मा मुलुकको ठूलो व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र हो ।
यसबाहे क अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रको सम्भावना पनि बोकेको छ यसले  । यो सगै प्रदेशको पूर्वी भागको विकासले तीब्रता पाउने छ भने ने पालगञ्ज पश्चिम भे गको व्यापारिक र औद्यो गिक केन्द्रको रुपमा अहिले नै अग्रभागमा छ । फराकिलो दिल र फराकिलो सो चका साथ यसलाई अझै विस्तार गनेर् हो भने ने पालगञ्जस“गै पश्चिमी भे गमा औद्योगिक, व्यापारिक र बर्दियाको पर्यटकीय केन्द्रले यहाको वैभवका लागि बल पु¥याउने छ । बीचमा उभिएको हुने छ, प्रशासनिक र राजनीतिक केन्द्र दाङ । दाङको विकाससगै मध्यभागका सबै जिल्लाहरुको सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकासले तीब्रता पाउने निश्चित छ । यसरी ने पालका सातवटै प्रदे शमध्ये नमूनायो ग्य अनि सवोर् त्कृष्ट प्रदेशको रुपमा ५ नम्बर प्रदे शलाई विकास गर्नका लागि पनि प्रदे शको राजधानीले दाङलाई नै खोजिरहेको छ ।